Raha manana MacBook Pro ianao manomboka amin'ny 2018 dia manana fanavaozana ho an'ny macOS High Sierra 10.13.6 | Avy amin'ny mac aho
Ora vitsy lasa izay, Apple dia nandefa kinova vaovao ho an'ireo mpampiasa manana 2018-inch na 13-inch MacBook Pro 15, amin'ny macOS High Sierra. Amin'ity tranga ity dia toa fanavaozana izay misy fiatraikany amin'ny maodely 2018 miaraka amin'ny Touch Bar ary amin'ny ankapobeny ny fanatsarana nampiharina tamin'ity fanavaozana ity dia mifantoka mivantana amin'ny fitoniana sy ny fahamendrehan'ny rafitra amin'ireo solosaina ireo.
Apple dia mamoaka ny kinova vaovao ary manolo-kevitra ny hametraka azy io faran'izay haingana amin'ny solosaina, koa aza ela loatra ny fanavaozana. Ny fananganana ireo kinova vaovao ireo dia 17G2037 / 15P6805, ka alao antoka fa nametraka an'ity kinova vaovao ity ny Mac anao ary raha tsy izany dia havaozina avy amin'ny Mac App Store.
Toa ny tsy fahombiazan'ny tatitra nataon'ny mpampiasa sasany tamin'ny milina tamin'ity taona ity no nahatonga ny famoahana an'io kinova vaovao an'ny macOS High Sierra, kinova farany izay tsy misy ifandraisany amin'ireo beta izay navoaka ho an'ny kinova manaraka an'ny macOS. Ho an'ireo mpampiasa Mac sisa dia tsy misy fanavaozana ary mbola miandry ny fandefasana amin'ny fomba ofisialy ny kinova macOS Mojave izay tsy ho ela loatra.
Ny fahamarinan-toerana sy ny fahombiazan'ny fitaovana dia miankina amin'ny OS ary ny olan'ity karazana ity dia voavahan'i Apple hatrany amin'ny fanavaozana, mety ho avy na ho ela na ho haingana, fa amin'ny tranga rehetra dia voavaha ny olana mba hiasa ireo milina nefa tsy mahomby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Raha manana MacBook Pro ianao manomboka amin'ny 2018 dia manana fanavaozana ho an'ny macOS High Sierra 10.13.6
SSD finday Samsung vaovao miaraka amin'ny teknolojia NVMe ary hafainganam-pandeha hatramin'ny 2.800Mb / s
AirPort Express izao dia manohana ny AirPlay 2